Alchemist – REDPlayer
Alchemist ဟာ Carry , Support , Durable , Disabler , Initiator , Nuker အစရှိသည်ဖြင့် ကစားနိုင်တဲ့ ဟီးရိုးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အားသာချက်ကတော့ ပါဝင်တဲ့ Acid Spray ရဲ့ AOE Damage အပြင် Armor လျှော့နည်းစေမှု ၊ Greevil’s Greed ကနေရတဲ့ Bonus Gold တွေကြောင့် Alchemist ကို လွယ်ကူစွာ Farm နိုင်တဲ့ ဟီးရိုးတစ်ကောင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားနည်းချက်ကတော့ Chemical Rage Form မရသေးခင်မှာ Str Gain နည်းတာကြောင့် အနေအထိုင် ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
အသုံးပြုလိုက်တဲ့ AOE တစ်ဝိုက် မှာ 16 sec ဟာ Damage သက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ AOE အတွင်းမှာရှိတဲ့ Enemy Unit တွေကို စက္ကန့်လိုက် သွေးလျှော့နည်းစေမှာဖြစ်ပြီး Armor ကိုပါ လျှော့နည်းစေမှာပါ။ Cast Range ကတော့ 900 ပါ။ Radius ကတော့ 400/475/550/625 ဖြစ်ပြီး Damage Per Second ကတော့ 15/20/25/30 ဖြစ်ပါတယ်။ Armor Reduction ကတော့ 4/5/6/7 ပါ။ Cooldown နဲ့ Mana Cost ကတော့ 22 sec နဲ့ 130/140/150/160 ဖြစ်ပါတယ်။
ability 1 Note
အသုံးပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကစလို့ ၅စက္ကန့်အတွင်း Enemy Hero ရှိရာဆီကို ပစ်လွတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုလိုက်တဲ့ အချိန် ကာလပေါ်မူတည်ပြီး Damage နဲ့ Stun Duration ကွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ 5.5 sec အတွင်း မသုံးနိုင်ရင် Alchemist အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး Damage ကော Stun ကော ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Concotion Radius ကတော့ 200 ဖြစ်ပါတယ်။ Maximum Brew Time ကတော့5sec ပါ။ minimum Damage ကတော့ ၁၀၀ ဖြစ်ပြီး Maximum Damage ကတော့ 160/240/320/400 ဖြစ်ပါတယ်။ Maximum Stun Duration ကတော့ 1.75/2.5/3.25/4 ဖြစ်ပါတယ်။
ability2note
Passive Spell တစ်ခုဖြစ်ပြီး Enemy Unit တစ်ကောင်ကို သတ်တိုင်း Extra Bonus Gold ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ Unit ကိုသတ်ဖြတ်ပြီး sec 30 အတွင်းနောက် Unit တစ်ကောင်ကို သတ်နိုင်ပါက Extra Gold ထပ်ကာထပ်ကာ တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Base Gold Bonus ကတော့4ဖြစ်ပြီး Extra Gold Bonus Per stack ကလည်း4ပါ။ Gold Bonus Cap : ကတော့ 16/20/24/28 ဖြစ်ပြီး Bounty Rune Multiplier ကတော့ 2.5 ဖြစ်ပါတယ်။
ability3note
အသုံးပြုလိုက်တာနဲ့ Attackspeed နဲ့ Movement Speed ကို မြန်ဆန်စေပြီး Regen ကိုတိုးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Base Attack Time ကတော့ 1.3/1.1.15/1 ဖြစ်ပြီး health regen bonus ကတော့ 40/48/56 ဖြစ်ပြီး Mana Regen Bonus ကတော့ 3/7.5/12 ဖြစ်ပါတယ်။ Rage Duration ကတော့ 25 sec ဖြစ်ပြီး Move Speed Bonus ကတော့ 40/50/60 ဖြစ်ပါတယ်။ Scpeter ၀ယ်လိုက်ပါက တစ်ခြား Allies Hero တွေအပေါ်မှာ အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။ Cooldown 55 sec နဲ့ Mana Cost ကတော့ 50/100/150 mana ကုန်ကျမှာပါ။
ability4note
Alchemist Talent Tree
Level 10 မှာဆိုရင် -8s Unstable Concoction Cooldown or +25 Attack Speed
Level 15 မှာဆိုရင် +50 Damage or +400 Health
Level 20 မှာဆိုရင် +400 Unstable Concoction Damage or +30% Cleave
Level 25 မှာဆိုရင် +30 Chemical Rage Regeneration or -0.2 Chemical Rage Base Attack Time တို့ကိုရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။
Talent Tree Note
Ablilty Build 1
Ablilty Build 2
Scared science of chemistry ဆိုတာ Darkbrew မိသားစုရဲ့ ရိုးရာပညာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် မိသားစုတွင်းကဘယ်သူမှ Razzilလောက် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု လေ့လာမှု မပြုကြပါဘူး။ တချိန်မှာတော့ Razzil တစ်ယောက် ရွှေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းပညာကို လေ့လာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ကာလတခုခန့်ကြိုးစားပြီးတဲ့နောက် Razzil တစ်ယောက် တောင်တစ်ခုလုံးကိုရွှေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြမယ်ဆိုတဲ့ စိမ်ခေါ်မှုနဲ့အတူ လက်အောက်ငယ်သား2ယောက်နဲ့ ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ယာကနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ တောင်တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးမှုနဲ့အတူ ထောင်ထဲကိုရောက်နေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကတော့ ဘီလူးအစားခံဖို့ပါပဲ။ ဘီလူးကိုမစားဖို့နဲ့ အတူထွက်ပြေးဖို့သိမ်းသွင်းပြီးတဲ့နောက် ထောင်တွင်းမှ ရနိုင်သမျှ အရာတွေနဲ့ လိုအပ်သမျှစုဆောင်းပြီး ဆေးစဖော်ပါတော့တယ်။ တစ်ပါတ်ခန့်အတွင်းမှာ ဖော်စပ်လို့ပြီးတဲ့အခါ ဘီလူးအတွက်တော့ ပျော်စရာနေ့လေးဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ Orge တစ်ယောက်ရဲ့ berseker mood ကဘယ်လိုနေမယ်ထင်လဲ မိတ်ဆွေ။ ထောင်နံရံနဲ့ ထောင်တံခါးသာမက တောင်နံရံတွေကိုပါ ပျက်ဆီးစေခဲ့ပြီ။ ပြေးလွှားခြင်းရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ တောအုပ်တစ်ခုရဲ့အလယ် … သူတို့ရဲ့ ဆေးဖော်မှု ရွှေရှာဖွေမှု လုပ်ငန်းအတွက် ဘီလူးနဲ့သဘောတူညီမှုရတဲ့နောက် Razzil ရဲ့ သက်ရှိသက်မဲ့များကို ရွှေအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းကထပ်မံစတင်လာပါတယ်။
Extra, known species, places
Dota2content and materials are trademarks and copyrights of Valve or its licensors. All rights reserved. This site is not affiliated with Valve.
Tags d2_strength dota2